फेब्रुअरी, 2012 डाउनलोडहरू, Featured, गुगल अर्थ / नक्सा
सम्पत्ति सीमा, Cadastre- स्तर बैंक
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो सिक्ने AutoCAD हेर्दै
अर्को पोस्ट तपाईंको एक्सचेन्जमा स्वतः सीएड 3D पाठ्यक्रम, $ 34.99 को लागिअर्को »
११114 जवाफ "UTM निर्देशांक बाट Google धरतीमा एक्सेल"
नमस्कार, के तपाईं डेमो वा अस्थायी परीक्षण अनुप्रयोग "UTM निर्देशांकबाट Google धरतीमा एक्सेल" साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ, केवल शैक्षिक उद्देश्यको लागि र प्रक्रियामा मैले तपाईंको अनुप्रयोग प्रमोट गर्दछु। धन्यबाद
साइटका सिफारिसहरू अनुसरण गर्नुहोस्, सूचना राख्नुहोस् र फिर्ता गर्नुहोस् वा त्रुटि »माइक्रोसफ्ट भिजुअल बेसिक execution कार्यान्वयन समयमा त्रुटि« 13 »: प्रकार Incompatíveis।
म कार्यक्रम चलाउँछु र म «रन-टाइम त्रुटि ´75´ प्राप्त गर्दछु:
नमस्ते क्यारोलिना, हामीले तपाईंको ईमेलमा लिंक पठाईसकेका छौं। हुनसक्छ उहाँ तपाईंको स्प्याममा जानुभयो।
यसलाई अधिक पोइन्टहरूमा विस्तार गर्न, कोड परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। सम्पादक @ geofumadas लाई टेम्पलेट पठाउनुहोस् र हामी यसलाई विस्तार गर्ने छौं।
शुभ प्रभात जुआन पाब्लो। डाउनलोडको लागि हामीले तपाईंको ईमेलमा लिंकलाई अस्वीकार गरेका छौं। सम्भवतः यो तपाईंको स्पाममा गएको थियो।
तिनीहरूले मलाई फाइलको साथ पेस गरे, मैले "प्रतीकात्मक योगदान" दुईपटक तिरेको र मैले फारम प्राप्त गरेन।
«त्रुटि कुनै टेम्पो डे एक्जिक्यु '' 75 ':
सडक / अभिलेखहरूमा पहुँचबाट एर्रो »।
मार्गहरू पत्ता लगाउन सजिलो तरीका, गुगल क्रोम खोल्नुहोस्, र यहाँबाट तपाईं «ctrl + o use प्रयोग गर्नुहुन्छ र फाईल खोज्नुहोस्। युआरएलमा तपाईले मार्ग देख्नुहुनेछ।
हामीले तपाईंलाई मेलमा लिंक पठाएका छौं। जे होस्, तपाईले सँधै स्पाम देख्नुपर्दछ, कहिलेकाँही यो त्यहाँ जान्छ।
हामीले पहिले नै तपाईले दुई पटक खरीद गर्नुभएका टेम्पलेटहरूलाई हामी रिभर्स गर्दै छौं। यदि तपाईंसँग बढि समस्याहरू छन् भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस्।
हामीले तपाईंलाई मेलमार्फत जवाफ दिएका छौं। कहिलेकाँही यो स्पाममा जान्छ, तर हामी तपाईंलाई लिंक अग्रेषित गर्‍यौं। यदि तपाइँसँग समस्या छ भने, हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
Geofumadas.com सज्जनहरू, मैले PayPal मार्फत भुक्तान गरिसकें "उत्कृष्ठ समन्वयबाट Google का लागि Google लाई उत्पत्ति" र प्रोग्राम डाउनलोड गर्ने समयमा मलाई फेरि PayPal पठाउँदछ, र त्यो गल्तीले फेरि $ 4.99 अमरीकी डालर चार्ज गरिएको छ।
स्पाम जाँच गर्नुहोस्। कहिलेकाहीं ऊ त्यहाँ जान्छ। यदि तपाईंलाई समस्या छ भने, ईमेलमा लेख्नुहोस् जुन इनभ्वाइसमा देखा पर्दछ।
कहिलेकाहीं ऊ त्यहाँ जान्छ। यदि तपाइँसँग कुनै समस्या छ भने, भुक्तान पुष्टिकरणमा संकेत गरीएको ईमेललाई जवाफ दिनुहोस्।
यो तपाईंको मेलमा छ। जाँच गर्नुहोस् कि कहिलेकाँही यो स्पाममा जान्छ
यो टेम्पलेट UTM डाटा प्रविष्ट गर्न बनाइएको हो। सुविधाहरू दशमलव डिग्री वा डिग्री / मिनेट / सेकेन्ड हुन सक्छ।
2-I समन्वय गरेर आइकनको प्रकार परिमार्जन गर्न सक्दछ।
पृष्ठ रिफ्रेस गर्नुहोस्, तपाईंले डाउनलोड / खरीद को लागी एक लि see्क अवलोकन गर्नुपर्नेछ
नमस्कार शुभ रात्री मेरो समस्या यो हो कि म पहिलो बाहिर आउँदा मैले के.एल. "75 कार्यान्वयन त्रुटि" सिर्जना गर्न दिएँ र त्यसपछि मैले उनीहरूले भने जुन मैले गरे "76 कार्यान्वयन त्रुटि" मैले गर्न सकें।
विशेष गरी यसले तिनीहरूलाई अक्षांश 32400.000000 र देशान्तर-1.000000 मा अनुवाद गर्दछ convers रूपान्तरण क्यालकुलेटरमा समान निर्देशांकहरूको प्रयोग गरेर, तथापि, म जाँच गर्दछु मूल खानु ठीक छ, किनकि मैले गुगल पृथ्वीमा पोइन्ट सम्पादन गरेको हुनाले, म क्यालकुलेटरको निर्देशांक राख्छु, र यसले मलाई राम्रो स्थान दिन्छ। धेरै धेरै धन्यबाद
जे भए पनि (मैले सबै कुरा कन्फिगर गरेको छु कि दशमलव अवधि संग र हजारौं अल्पविराम संग जान्छ) मलाई सधैं भूमध्य रेखामा लैजान्छ। देशान्तर मलाई लाग्छ मेरो लागि राम्रो छ, तर अक्षांश0हो। विशेष गरी मैले यो UTM ED50 डाटा राखे जुन उत्तरी स्पेन (नाभरा) बाट सम्बन्धित wgs84 होईन, र व्यवस्थित रूपमा गिनीको खाडीमा समाप्त भयो।
त्यसोभए तपाईं आफ्नो मेसिनको क्षेत्रीय सेटिंग्समा जानुहोस् र परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईंले हजारौं विभाजक र सूची विभाजकको रूपमा अल्पविराम प्रयोग गर्न आवश्यक छ; दशमलव विभाजकको रूपमा पोइन्ट।
मैले फाईल सिर्जना गरेको छु तर पृथ्वीमा हेर्दा यसले मलाई एन पोलमा पठाउँदछ। म तपाईंलाई भन्छु: UTM निर्देशांक जुन मैले प्रयोग गरेको अक्षांश र देशान्तरमा निर्देशांकबाट रूपान्तरण गरिएको थियो, तर WGS50 को सट्टा ED84 डाटाम प्रयोग गर्दै। के मैले तिनीहरूलाई एक्सेलमा प्रयोग गरिएको युटिएम ढाँचामा पहिले जानु पर्छ? जे भए पनि, मैले सोचें कि उनीहरू मिलेन भने पनि, अन्तर एकदमै उच्च हुने छैन, किनकि यदि मैले उनीहरूसँग ED50 का प्रयोग गर्ने केही निर्देशांकहरू WGS84 (तिनीहरू स्पेनबाट आएका हुन्) मा तुलना गरे, अफसेट केहि मीटरहरू छन्, तर नक्शामा मलाई लाग्छ तपाईं केहि देख्न सक्नुहुन्न, "लेबलहरू" स्तम्भमा लेबलहरू पनि होइन। केहि विचार जहाँ म गलत छु? चरणहरू र दशमलव ढाँचा सही देखिन्छ (क्षेत्र 29 हो?)।
मैले भौगोलिकबाट यूटीएममा रूपान्तरण गर्ने बारेमा लेखेको थिएँ, तर गुगलसँग जानको लागि फाईलसँग मलाई समस्या छ यदि यसले फाईल उत्पन्न गर्छ भने तर सबै पोइन्टहरू 180grades0मिनेट 0.00 सेकंड उत्तरमा र अक्षांश 74 डिग्री0मिनेट र 0.00 सेकेन्डको साथ रहन्छ। पश्चिमले नक्शामा पोइन्ट पनि देखाउँदैन। यदि तपाईं मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भने म कृतज्ञ छु। ग्लोरिया डोमिue्ग
कृपया मलाई यकिन गर्नुहोस् कि मैले गुगल पृथ्वी फाईलमा डाउनलोड गर्न टेम्पलेट किन प्राप्त गरिन, UTM लाई भौगोलिक निर्देशांक पास गर्न। धन्यबाद GEDL
जवाफको लागि धन्यबाद, मैले भनेको कुरा गरेँ। समस्या जारी रह्यो, यद्यपि, तब मैले निर्यातको लागि किमीएल फाइलमा तोकिएको नाम परिवर्तन गरें र यसमा सुधार आयो। एक साथीको समर्थन बाट म «\_ SIMV \_ MAPAS.000.000.000.kML from बाट« \_ SIMV \_ MAPS \_ test.kML »मा परिवर्तन भयो। अब यसले यसलाई निर्यातको लागि तोकिएको फोल्डरमा पठाउँदैन तर अन्तत: फाइल उत्पन्न हुन्छ, यो समान फोल्डरमा छ जहाँ स्प्रेडशिट एक्सेलमा छ।
12जारी राख्नुहोस् समाप्त 3.Peration 4. मद्दत
सब भन्दा व्यावहारिक यो हो कि इन्टरनेट ब्राउजरबाट, मार्ग खोजी गर्न ठेगाना खोज्नुहोस्, किनभने यदि तपाईंसँग खाली ठाउँ सहित मार्गको नाम छ: «मेरो कागजातहरू», तपाईंले ब्राउजरको यूआरएलमा देखा पर्ने छ त्यस्तै लेख्नु पर्छ।
नमस्कार तपाईले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ म "75 रनटाइम त्रुटि" मलाई किमी मार्ग फाइल द्वारा सिर्जना गर्न "मार्गहरू" को उदाहरण दिनुहोस्। मेरो कागजातहरूको उदाहरण वा डाउनलोडहरूमा वा डेस्कटपमा। धन्यबाद
कहिलेकाँही यो प्रश्न हो कि मार्ग खराब निर्माण गरिएको छैन। त्यो मार्ग कस्तो छ भनेर हेर्नको लागि एक तरीका भनेको ब्राउजरबाट छवि फाईल खोल्नु हो, छविमा दायाँ क्लिक गरेर र यससँग खोल्नको लागि छनौट गरेर ... र ब्राउजर छनौट गर्नुहोस्; त्यसोभए तपाईं माथिको मार्गमा हेर्नुहोस्।
अक्षांश: 20.654443 देशान्तर: -103.377499
"त्रुटि '13' रन समयमा भयो।
प्रकारहरू मेल खाँदैनन् »
प्रयास गर्नुहोस् किनभने टेम्प्लेटले हजारौं र दशमलवहरू छुट्याउन बिन्दुहरूलाई अल्पविरामको रूपमा विचार गर्नु पर्छ; तपाईंले यसलाई त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
यो किनभने ड्राइभ सीमा मैले पहुँच प्रतिबन्धित गरेको छु किनकि: मार्ग परिवर्तन गर्दा यसले कुनै समस्या भएन। म बहुभुज उत्पन्न गर्ने एउटा बनाउन कोसिस गर्दछु।
याद गर्नुहोस् कि गुगल अर्थको ओर्थोफोटोहरू बिभिन्न भिन्नताहरूको साथ विस्थापित छन्। त्यसोभए जब तपाईं निर्देशांकहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ जुन तपाईं बुझ्नुहुन्छ, टेम्पलेटको साथ, गुगल अर्थ के कोर्डिनेन्ट सत्यापित गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् कि यसले डाटाम WGS84 सँग टेम्पलेटबाट निर्यात गरेको कुरासँग मेल खान्छ कि भनेर।
यदि निर्देशांक मेल खान्छ, तर फोटोबाट अफसेट गरिएको छ भने, त्रुटि छविबाट हुन सक्छ। जुनसुकै तरिकामा म सुझाव दिन्छु कि उनीहरूले त्रुटिहरू पत्ता लगाउँदछन् किनकी मैले नि: शुल्क प्रयोगको लागि टेम्पलेट उत्पन्न गरेको छ तर यसको लागि उनीहरूले मलाई अवलोकनको साथ प्रतिक्रिया दिन आवश्यक छ।
src = »फाईल: /// C: /Uvers/User/Downloads/woopra_ios.png»
मैले जोन 19N मा निर्देशांकहरू पनि प्रविष्ट गरें र डाटा पूर्ण रूपमा विस्थापित भए।